I-IDRA-21 Powder Dosage, Half-life, Izinzuzo, Imiphumela emibi, kanye nokubuyekezwa
1. Yini i-IDRA-21 powder?
Kungumuntu ngokuphelele ukuhlala ubheke okuthile okungakunika onqenqemeni. Ukwenza ngcono ukusebenza komuntu, iningi manje seliphendukela kuzidakamizwa ezihlakaniphile, ezaziwa kangcono njenge-nootropics. Kungenzeka ukuthi uhlangane nezithasiselo eziningi ezithi zithuthukisa ukusebenza kwengqondo yakho kepha ngabe ume ukuze uzibuze ukuthi yikuphi okusebenzayo? I-IDRA-21 isidakamizwa esithathwe esakhiweni samakhemikhali se-benzothiadiazine. Kunezimangalo zokuthi i-IDRA-21 ihlobene ne-Aniracetam, enye i-nootropic ebuthakathaka izikhathi ezingamashumi amathathu kune-IDRA-21. Uzobona ukuthi i-IDRA-21 iyi-nootropic ehamba nenkulumo. Ingenye yama-nootropics amahle kakhulu apakisha i-punch uma kukhulunywa ngokukhulisa inkumbulo yakho, ukugqugquzela, izinqubo zokucabanga, nokwenza ngcono umkhiqizo wakho. Kusha emakethe, kanti nocwaningo lusaqhubeka ukuqonda kabanzi ngalo 22503-72-6 umthelela kwimemori, ikhono lokuqonda, nokuguqula ukushiyeka kwengqondo.
2. Isebenza kanjani i-IDRA-21?
Njengomuthi we-ampakine, i-IDRA-21 isebenza ngokushintshashintsha okuhle kwe-allosteric yama-receptors e-glutamate AMPA ebuchosheni. Njengoba ama-AMPA receptors abangela ukudluliswa kwe-synaptic okusheshayo, kunokwanda kwamandla e-synaptic ejabulisayo. Kuyaziwa nangokuthi kusebenze i-allosteric.
3. Umthamo onconyiwe / Usebenzisa Ukufundiswa kwe-IDRA-21
Yize i-IDRA-21 ihlolwe kuphela ezilwaneni, abantu abaningi bayisebenzisile, kanti abanye basakusebenzisa. Ukuba yi-nootropic edumile, abantu abaningi bakhulume ngomthamo omuhle onikeza imiphumela ephezulu. Imithombo eminingi isikisela ukuthi Umthamo we-IDRA-21 kufanele ibe ngaphezulu kwe-10mg kungakapheli amahora angama-48. Ungayithatha ngaphambi kokudla noma ngemuva kokudla ngoba inganyibiliki amanzi futhi idinga ingilazi yamanzi kuphela ukuze uyiqede. Uma kungukuhlangana kwakho kokuqala nale nootropic, kungakuhle ukuthi uqale ngomthamo ophansi we-IDRA-21. Ungayandisa kancane kancane lapho uqiniseka ukuthi umzimba wakho awuphathi kabi ngokusetshenziswa kwayo. IDRA-21 isitaki se-nootropic Ngaphandle kokuthi ungasebenzisa i-IDRA-21 ngokwakho, ungakhetha ukuyihlanganisa namanye ama-nootropics noma izithasiselo ukuze uzuze izinzuzo eziningi zokuqonda. Ngenxa ye-excitotoxicity engaba khona nokuntuleka kocwaningo olwanele, kufanele uhambe kancane kuyo. Ngeke sincome ukubekwa kwe-IDRA-21 nganoma iziphi ezinye izidakamizwa ze-ampakine njenge-Aniracetam. Amanye ama-nootropics akhulisa amazinga e-glutamate nawo kufanele agwenywe.
4. Yini imihlomulo ye-IDRA-21?
Noma yimuphi umuntu ogqugisiwe ukhuphumele umkhiqizo. Thatha, ngokwesibonelo, uma unamandla okuqhuba kahle kakhulu osukwini lwakho lwezinto ezenziwa nsuku zonke, kungenzeka ukuthi ufeze izinhloso zakho. Ngakolunye uhlangothi, uma ungenaso isisusa sokwenza noma yimuphi umsebenzi, ulimaza amathuba akho okukhula. Okukodwa kwe Izinzuzo ze-IDRA-21 wukuthi kuholela ekutheni kube nogqozi olwenziwe ngcono olukuqhakambisa ukusebenza kahle futhi kukhuphule umkhiqizo. Ngenxa yalokho, ungafinyelela izinhloso nezinhloso zakho ngaphandle kokuzwa sengathi uziphoqa kanzima.
Khulisa ukunemba komsebenzi
Sonke siyazi ukuthi imiphumela ephelele ifuna okungaphezu kokuzama nje. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukuthi ubeke konke kodwa ubone ukuthi awutholi ukunemba okungu-100% ongafuna ukukufeza. Into enhle ukuthi I-IDRA-21 powder ikuqinisekisa ngokugxila nokunakwa okudingayo ukuze ufeze imiphumela eqondile oyifunayo. Kuhlanganiswe nokuzikhandla, ungaqiniseka ukuthi uzothola ukunemba okuphezulu kakhulu.
Ukwanda kwimemori yesikhashana
Njengoba ukhula, uzobona ukuthi inkumbulo yakho yesikhathi esifushane ayisabukhali njengoba yayinjalo ngaphambili. Uqala ukukhohlwa ngisho nezinto ezisobala kakhulu, futhi ukumelana nalokhu, ukwenza amanothi amafushane noma amanothi kuba ngumngane wakho. Ngenkathi ungazizwa ukhathazekile ukuthi inkumbulo yakho yesikhathi esifushane kungenzeka ingaphinde ifane, asikho isidingo sokwethuka. Lokho kungenxa yokuthi ungangeza inkumbulo yakho yesikhathi esifushane nganoma yisiphi isikhathi ofuna ngaso. Ukusetshenziswa kwe 22503-72-6 kungenye yezindlela eziphumelelayo ongazisebenzisa bhekana nezinkinga zesikhashana zokulahlekelwa inkumbulo. Shono isetshenziselwe ukwelapha i-amnesia. Ngokusebenzisa kwayo, ungakhumbula okudingeka ukwenze empilweni yakho yansuku zonke.
Inemiphumela ethile yokwelashwa ekucindezelekeni
Ngabe uzizwa udabukile, ukhathazeka njalo, noma ubhekene nengcindezi? Ingabe isifiso sakho sokudla sinciphile? Ingabe ulwela ukulala? Uma impendulo yakho ingu-yebo, khona-ke ungahlushwa ukudangala. Njengoba kungenzeka uyazi, ukudana kungayithinta kabi impilo yakho, kukwenze ungafinyeleli ikhono lakho eliphelele. Ngenhlanhla, akunzima ukukunqoba ngokusetshenziswa kwe-IDRA-21. Ngokunika ubuchopho bakho amandla, kungakusiza ekulweni nokudangala. Futhi, inomphumela wokwelapha ozokusiza uzizwe ungcono noma kunini lapho uzizwa sengathi ukukhathazeka kuyangena.
Ukwanda kokugxilwa kwengqondo
Amandla okuhlala unake isikhathi eside engaphazamiseki abaluleke kakhulu uma ufuna ukusebenza okuhle kakhulu. Uma ubona ukuthi isikhathi sakho sokunaka siya ngokuya sibanga, ungasebenzisa i-IDRA-21. Kusuka ekubuyekezweni kwe-IDRA-21 online, kunezimangalo zokuthi kukusiza ukuthi uhlale emsebenzini futhi unikeze ukunakwa okufanele. Lokho kungenxa yokuthi kukusiza ukuthi ugxile ngokomqondo noma ngabe kukhona konke ukuphazamiseka ngaphandle.
Ukwanda kokubona komuntu kwezinzwa
Umbono wezinzwa ungachazwa njengomqondo wesithupha okufanele wonke umuntu abe nawo. Kuyikhono ukubona izinto nokuqonda umhlaba okuzungezile ngendlela engcono. I-IDRA-21 ibeka ngaphezulu ukuqonda kwakho kwenhliziyo kukwenze ube bukhali.
Isiza ekwelapheni izimo zemizwa eziningana
Namuhla, ukusetshenziswa kwe-IDRA-21 kufakiwe ekwelapheni nasekunakekelweni kweziguli eziphethwe yizimo eziningana zemizwa efana nenqubo yokuguga, ukuwohloka kwengqondo, isifo se-Alzheimer's, nesifo seParkinson.
Amakhono ethu okuqonda awahleliwe. Njengoba abantu abaningi bavame ukucabanga ukuthi ufuzo lwethu luyabanquma, kunezindlela ongawafinyelela ngazo amazinga aphezulu wokuqonda. I-IDRA-21 ingesinye sezithuthukisi zokuqonda ezikhipha ngokwemibandela yokuthuthukisa ubuhlakani bomuntu.
5. Imiphumela Emibi ye-IDRA-21
Abantu abaningi bayakhuza ngalesi sidakamizwa ngoba asinamiphumela emibi. Ngomthamo onconyiwe, kungenzeka ukuthi ungahlangani nanoma yimiphi imiphumela emibi ye-IDRA-21. Kodwa-ke, abanye bangathola imiphumela emibi ehlobene nokusetshenziswa kwama-nootropics noma ama-ampakine. Kunjalo Imiphumela emibi ye-IDRA-21 faka;
Ukwanda kwe-glutamate neurotransication kuvame ukudala le miphumela emibi ye-IDRA-21. Kakhulu, lokhu kwenzeka kulabo abasebenza kwe-AMPA yabo kakhulu futhi abadingi ukusebenzisa i-IDRA-21. Imiphumela emibi akufanele, nokho, ikwesabise; umuthi unamandla amakhulu, futhi izinzuzo zidlula imiphumela emibi. Kungenzeka ukuthi ungaze uhlushwe yinoma yimuphi wayo, Uma uke wahlaselwa isifo sohlangothi esikhathini esedlule esedlule, kufanele ugweme ukusebenzisa lesi sidakamizwa ngoba singenza isimo sakho sibe sibi kakhulu.
6. Izifundo / Ucwaningo nge-IDRA-21
Esikhathini esedlule izifundo bezenziwe emandleni e-IDRA-21 nokuthi isebenza kanjani kwi-AMPA. I-IDRA-21 ihlolwe kumagundane elebhu okwakumele adlulise umugqa wamanzi. Kwaphawulwa ukuthi amagundane ayephathwa nawo I-IDRA-21 kwenziwe kangcono kakhulu ngokuqhathaniswa naleyo engazange. Bakukhombisile lokhu ngokufinyelela ekuphumeni kwe-maze kuqala. Umphumela we-IDRA-21 ne-huperzine kwimemori yokuqashelwa okubukwayo kuma-macaque amasha futhi asetshenziselwa ukuhlola ukusebenza kwawo.
7. Ukubuyekezwa kwe-IDRA-21 powder
Kwandisa ukugxila kwengqondo kanye nokugxila U-Edwin R. uthi, “Le nootropic ishaya zonke ezinye izinto ekugcineni eyodwa igxile emqondweni. Ngingakufakazela lokhu ngoba selokhu ngaqala ukukuthatha, ngibonile umehluko omkhulu endleleni engifunda nengisebenza ngayo. Ngitadisha kakhulu emuva komsebenzi, futhi esikhathini esedlule bengingakwazi ukunaka kokubili. Ngangihlala ngehluleka kokukodwa, kepha lokhu akunjalo kulezi zinsuku. Umphathi wami ungitshela ukuthi sengisebenza kanzima ngenkathi uthisha wami ethi manje sengingumfundi ogxile kakhudlwana. Ngiyalithanda neqiniso lokuthi ukuthatha i-IDRA-21 kulula kakhulu kimi ngoba ngiyithatha nganoma yisiphi isikhathi sosuku ngengilazi yamanzi. I-IDRA-21 iyilokho ebengikade ngikufuna. ” Ungisize ngokudangala komoya omnene U-Essy J. uthi, “Muva nje, bengicindezelwa kakhulu ngumsebenzi wami ocindezelayo, impilo entsha yengane kanye nokuphila okudala kimi. Ngiye ngazama izidakamizwa ezimbalwa, kepha azibonakali zingenza ngizizwe ngcono. Ngenhlanhla, umngane wangincoma ukuthi kufanele Thenga i-IDRA-21 powder ukuzama ukulwa nokucindezeleka nokuhlaselwa ukukhathazeka. Yebo, sekuthathu kuphela kulo muthi, futhi kube nomphumela omuhle kakhulu. Manje sengikwazi ukucabanga kahle usuku lonke ngaphandle kokuhlushwa ukushintsha kwemizwelo. Ngingayincoma kunoma ngubani onomuzwa wokuthi kufinyelele ekugcineni. ” Kwasiza indodakazi yami ukubhekana nokukhohlwa UWilliam S. uthi, “Indodakazi yami ine-ADHD enamandla futhi ukugxila ngisho nasemizuzwaneni emihlanu kuwumsebenzi omkhulu. I-IDRA-21 powder, noma kunjalo, ibe ngumsindisi kusukela ukusindiswa kwakhe kuthuthuke kakhulu. Ukhumbula futhi izinto eziningi kunangaphambili, ngenxa yalo mkhiqizo. Ngibonile futhi ukuthi ayinayo imiphumela emibi kuye, futhi lokhu kuyenza ithole amamaki amaningi. Ngiyabonga IDRA-21, ingane yami manje ingaphila impilo ejwayelekile. ”
8. Ungayithenga kuphi i-IDRA-21 powder?
Njengoba kubonwe ku-athikili, i-IDRA-21 iyakwazi ukunikeza impilo yakho inguquko ephelele. Ngaphandle kokwenza ukhiqize ngokwengeziwe futhi uqaphele, i-IDRA-21 ingakwenza ube nokuphila okujabulisayo. Ngiyazi ukuthi manje usungazibuza ukuthi ungawuthathaphi. Enye yezinselelo ezibaluleke kakhulu abantu ababhekana nazo ukuthola umthombo othembekile we-IDRA-21. Lokho kungenxa yokuthi lo mkhiqizo uphenduke waba yigugu elingajwayelekile uma ucabanga ukuthi usezifundweni zawo zokuqala zokwelashwa. Lokho akusho, kepha, akusho ukuthi awusoze wabeka izandla zakho kwikhwalithi ye-IDRA-21. Ungahlala njalo thenga i-IDRA-21 online futhi ihanjiswe endaweni yakho. Lokhu akukugcini yini ikhanda lokusuka esitolo uye esitolo ulicela? Beka i-oda nathi namuhla bese uqala uhambo lwakho ukuze ugqugquzeleke kakhulu futhi usebenze kangcono.
Izidakamizwa Zokwandisa Ukuqondisisa, ihlelwe nguJerry J. Buccafusco, ikhasi 92-93
I-Ampakines: I-Ampakine, i-Cx717, i-Idra-21, i-Ly-503,430, i-Aniracetam, iPepa, i-Farampator, i-Cx-516, i-Unifiram, i-Sunifiram, i-LLC Izincwadi, i-General Books LLC, i-2010, ikhasi 1-36
Ezempilo Nezidakamizwa: Izifo, Umuthi kadokotela Nemithi, NguNicolae Sfetcu
1.Yini i-IDRA-21 powder?
Isikali Esinconyiwe / Sisebenzisa Ukufundiswa kwe-IDRA-3
4. Ziyini izinzuzo ze-IDRA-21?
Imiphumela Eceleni ye-IDRA-5
6.Izifundo / Ucwaningo nge-IDRA-21
Ukubuyekezwa kwe-7.IDRA-21 powder
8.Ukuphi ukuthenga i-IDRA-21 powder?
2019-08-14 i-wisepowder Ama-Nootropics